कामचलाउ सरकारले लगायो नियुक्तिको मेला – Palika Times
२८ माघ, काठमाडौं । प्रदेशमा चुनाव हारेकालाई केन्द्रमा मन्त्री पद, संसदीय सुनुवाइविना ३२ जनालाई संवैधानिक आयोगमा जिम्मेवारी, मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा युवा परिषद्को बोर्डमा २४ जना नियुक्त, भूमि समितिका नाममा ७७ जिल्लामा दुई सय ३१ कार्यकर्तालाई प्रथम श्रेणी (सहसचिव) र उपसचिवस्तरको सुविधा
देशको संविधानले प्रस्ट भनेको छ, ‘संसद् सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री सो पदबाट मुक्त हुनेछ ।’ विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला वा मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री पदबाट समेत राजीनामा दिएका थिए । तर, यसपालि प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक संस्कार पनि देखाएनन् । आफैँ संसद् सदस्य नरहेका ओलीले धमाधम गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएका छन् । संसद् विघटन गरेपछि उनले टीका लगाएर मन्त्री बनाएका छन् । कतिसम्म भने गत निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक– २ ‘ख’ बाट प्रदेश सभामा निर्वाचन हारेका दावा तामाङलाई सीधै केन्द्रका मन्त्री बनाएका छन् । त्यस्तै, गृहजिल्ला डोटीमा काठ तस्करी गरेको मुद्दा खेपेका प्रेम आलेलाई ओलीले वनमन्त्री बनाएका छन् ।
यस्ता संयन्त्रले सुकुम्बासीभन्दा पनि भूमाफियाको पक्षमा काम गर्ने सम्भावना हुन्छ : शारदाप्रसाद त्रिताल, पूर्वसचिव
सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने नाममा सुरुदेखि नै गलत काम हुँदै आएको छ । पञ्चायतकालदेखि जुन प्रमाणपत्रहरू दिइयो, कतिपय ठाउँमा जग्गा दिइयो । त्यो नै गलत किसिमले भएको छ र त्यसमा ठूला–ठूला भ्रष्टाचार भएका छन् । सुकुम्बासीको नाममा माफियाहरूको सेटिङमा काम भएका छन् ।
वास्तविक सुकुम्बासी एकदमै कम छन् । म सुर्खेतमा क्षेत्रीय प्रशासक भएर बस्दा दाङ, सुर्खेत र बाँकेमा अध्ययन पनि गरेका थियौँ । त्यहाँ वास्तविक सुकुम्बासी करिब १५ प्रतिशत मात्र देखिएको थियो । अरू हुकुम्बासी अर्थात् माफियाले नै मान्छे राख्छन् ।
अहिलेको आवश्यकता के हो भने सुकुम्बासी भनेर विगतमा दिइएका प्रमाणपत्र र जग्गाको छानबिन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म भएको जग्गा वितरण कति ठीक थियो भनेर अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्ने हो । आयोगले वास्तविक सुकुम्बासी पत्ता लगाउँथ्यो, उनीहरूका लागि के गर्ने भन्ने नीति सरकारले बनाउनुपथ्र्याे ।
अहिले वितरण हुने ८० प्रतिशत जग्गा नक्कली सुकुम्बासीले पाउँछन् । वास्तविक सुकुम्बासीले भने कुनाकाप्चा र अनुत्पादक जमिन मात्र पाएका छन्, राम्रा जग्गा भूमाफियाले कब्जा गरिसकेका छन् । त्यसैले अहिले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने हो भने कुनै पनि व्यक्तिको कम्तीमा तीन पुस्ताको अध्ययन गरेर, ऊ साँच्चिकै सुकुम्बासी हुने अवस्था थियो कि थिएन भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ ।
अहिले भूमिहीनलाई जग्गा दिने भनेर जसरी ७७ जिल्लामा राजनीतिक नियुक्ति गरिएको छ, त्यो आवश्यक थिएन । जिल्लाका सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले नै त्यसलाई समन्वय गर्न सक्थे । जिल्ला समन्वय समिति छँदै थियो, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालयमार्फत पनि गर्न सकिन्थ्यो । कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले हुने यस्ता नियुक्तिले बोझ मात्र थप्छ, समस्या समाधान गर्दैन । यस्ता संयन्त्रले सुकुम्बासीभन्दा पनि भूमाफियाको पक्षमा काम गर्ने सम्भावना हुन्छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे भन्छन्– राजनीतिक नियुक्ति हो, कुनै योग्यता र मापदण्ड चाहिँदैन
हरेक जिल्लामा एकजना अध्यक्ष, एकजना विज्ञ सदस्य र अर्का सदस्य नियुक्त गरिएको हो । विज्ञ सदस्यको योग्यता तोकिएको छ । स्नातक गरेको र कृषि तथा भूमि क्षेत्रमा अनुभव भएको भन्ने छ, अरूका लागि त विशिष्ट योग्यता तोकिएको छैन ।
योग्यता र मापदण्डसमेत नतोकी सीधै नियुक्ति गर्न मिल्छ त ?
यो त सरकारी जागिर होइन, एकप्रकारको राजनीतिक नियुक्ति हो । त्यसकारण सूचना निकाल्ने, प्रतिस्पर्धा गराउने भन्ने विषय होइन ।
सत्तारुढ दलका निकट कार्यकर्ताहरू मात्र नियुक्त भएका छन्, पार्टीको गुट बलियो बनाउन नियुक्ति बाँडियो भनेर आलोचना भएको छ । त्यस्तो समितिले सबैका लागि काम गर्न सक्छ त ?
विगतदेखि नै यस्तो प्रकृतिको आयोगमा राजनीतिक निर्णयकै आधारमा नियुक्ति हुन्छ । यो एकप्रकारको राजनीतिक एजेन्डा पनि हो । राजनीतिक नियुक्तिमा यस्तै अभ्यास छ ।
स्थानीय तहले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको प्रारम्भिक तथ्यांक संकलन गर्दछ । पहिचान र प्रारम्भिक नामावली संकलन स्थानीय तहले गर्छ, त्यसको भेरिफिकेसन गर्ने, यकिन गर्ने, स्थानीय तह र केन्द्रीय आयोगबाट समन्वय गर्ने काम जिल्ला समितिले गर्छ । जिल्ला समितिको सिफारिसका आधारमा निर्णय केन्द्रीय आयोगको नै हुन्छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छ।